Kulanka oo ka dhacay guriga guddoomiyaha baarlamaanka ayay labada mas'uul uga hadleen sidii doorashada madaxnimo ee dalka aysan uga dib dhici lahayd maalinta Isniinta ah ee soo socta.
"Waxaan kawada hadalnay aniga iyo Sheekh Shariif sidii loo howlaha harsan loogu dhameystiri lahaa si wanaagsan, baarlamaanka howshiisana uma hakanayso dhowr xildhibaan oo ka maqan baarlamaanka," ayuu yiri Prof. Jawaari.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in xildhibaannada horay looga reebay inay ka mid noqdaan baarlamaanka ee ay xukuntay maxkamadda sare ay u saareen guddi kasoo shaqeeya arrintooda, inta go'aan laga gaarayana aysan dartood u hakan doonin howlaha baarlamaanka.
Madaxweynaha dowladdu xilligeedu dhammaaday Shariif Sheekh Axmed oo isaguna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in waxyaabihii ugu waaweynaa ee ay ka heleen inay ka mid yihiin sidii lagu dhameystiri lahaa howlaha harsan oo ay doorashada ugu weyn tahay.
"Waxaan kawada hadalnay aniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka sidii howlaha socda loogu dhameystiri lahaa si wanaagsanoo aan lahayn xasaasiyaad lahayn, waayo dunida oo dhan ayaa indhaha ku haysa waxa dhacaya, mana doonano in howshii lasoo qabtay ay wax gaaraan, runtiina waan isla meel dhignay wixii aan kawada hadalnay oo dhan," ayuu yiri Sharifi Sheekh.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo Shariif Sheekh ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in doorashada madaxnimo ee dalka ay ku dhacdo si wanaagsan, iyagoo muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in doorashada madaxnimo ee dalka lagu qabto Muqdisho kaddib muddo nas qarni ku dhow.